Sida loo kiciyo galka faylasha ee macOS Mojave | Waxaan ka socdaa mac
Qolka Ignatius | | MacOS Mojave, Tababarada
Tan iyo Isniintii la soo dhaafay, nooca cusub ee macOS ee kombiyuutarada Mac, oo suuqa soo galay laga soo bilaabo 2012, ayaa hadda lagu heli karaa magaca Mojave. In aan ka imid Mac, waxaan samaynay casharo kala duwan oo ina tuso maxay yihiin howlaha ugu waaweyn waxa noocani cusub na siinayo iyo sida ay u shaqeeyaan.
Shaki la'aan, mid ka mid ah kuwa soo jiitay dareenka ugu badan intii lagu jiray WWDC 2018 ee lagu soo bandhigay macOS Mojave, waa habka mugdiga ah, a hab mugdi ah oo aad u fudud in la dhaqaajiyo sida aan ku tusno maqaalkan. Riwaayad kale, gaar ahaan loogu talagalay kuwa ugu badan ee aan nidaamsanayn xirmooyinka shaqada ee faylasha ama xirmooyinka ku qoran Ingiriisiga.
Shaqadani si toos ah ayey u daryeeshaa ku dhaji dhammaan faylasha dusha desktop-ka iyadoo kuxiran nooca feyl ee ay tahay. Sidan oo kale, adoo kicinaya shaqadan, oo ah mid si rasmi ah loo hawlgaliyay, waxaan si dhakhso leh ugu nadiifin karnaa desktop-ka annaga oo ku soo wada ururinayna dhammaan faylasha guntooda.
Al dhagsii xarfo kasta oo feylal ah, dhammaan kuwa isku dhafan ayaa la muujiyay si aan ula macaamili karno iyaga sidii aan iyaga la kooxaysiin. Haddii aad rabto inaad dhaqaajiso shaqadan, markaa waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Haddii aan horey u haysannay qaddarro badan oo feylal ah oo ku jira desktop-keena, waa inaan tagnaa meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka, riix badhanka midig ee midig, ama aan ku dhajinno laba farood haddii aan isticmaalno trackpad-ka oo aan ku riixno xulashada Isticmaal baytariyada.
Waqtigaas, waxaan arki doonaa sida faylasha oo dhan ayaa la isugu geyn doonaa tuulmooyin, iyadoo kuxiran nooca feyl ee ay yihiin. Xaaladdayda, sida aad ku arki karto sawirka kore, macOS waxay faylasha u galisay dukumiintiyo, sawirro, shaashado, iyo inbadan. Xirmooyinka waxaa loo abuuray si toos ah mana ka wareejin karno desktop-ka, hawsha ay Apple ku dari karto casriyaynta mustaqbalka.
Haddii aan rabno dhammaan faylasha ku noqo booskoodii horeWaxaan kaliya oo aan ku khasban nahay in aan sameyno howsha dib u noqoshada oo aan iska baarno ikhtiyaarka baytariyada Isticmaalka. Waqtigaas, faylasha oo dhami waxay ku laaban doonaan meeshii ay markii hore ka yimaadeen
1 Sida loo isku geeyo
2 Sida loo tirtiro xirmooyinka faylka
3 My Mac kuma jaanqaadi karo macOS Mojave laakiin waxaan rabaa in aan isticmaalo faylalka galka ah
4 Sida loo cusbooneysiiyo macOS Mojave xoq
Sida loo isku geeyo
Sida aan kor uga faallooday, mid ka mid ah shaqooyinka ay tahay in macOS lagu daro casriyeynta mustaqbalka waa suurtagalnimada in la awoodo ku wareeji batariyada aan abuurnay miiska, maaddaama ay ku yaalliin oo keliya dhinaca midig ee shaashadda oo ah meel taagan, wax laga yaabo in aysan ahayn kuwa ugu habboon ee adeegsadayaal badan waxayna doorbidaan inay dhigaan dusha shaashadda si siman.
In kasta oo ay run tahay, in baytariyada ikhtiyaariga ah ma laha qaabeyn dheeri ah, macOS waxay sameysaa taxane dejin ah oo aan heli karno si aan u kala soocno waxyaabaha ka muuqda iyaga. Mar haddii baytariyada lagu hawlgeliyo macOS, waxaan mar labaad ku riixnaa badhanka midig ee midig ama laba farood haddii aan u isticmaalno jidka si aan mar kale u marinno meesha aan ka hawlgalno.
Midig xagga hoose, ikhtiyaar cusub oo loo yaqaan 'Group Stacks By' ayaa la soo bandhigayaa. Ikhtiyaarrada ay macOS ka dhigeyso mid noo diyaar ah abaabul xidhmooyin leh:
Taariikhda furitaanka ugu dambeysa
Taariikhda ka mid noqoshada
Taariikhda wax ka beddelka
Markaad gujiso, tusaale ahaan, Taariikhda Furan ee Furan, macOS waxay soo bandhigi doontaa xirmooyinka la abaabulay iyadoo loo eegayo bishii ama maalintii la furay markii ugu dambeysay. Sidan oo kale, way fududahay in la helo dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee aan abuurnay oo aan ku martigelinay desktop-ka macOS.
Haddii aan u isticmaalno astaamaha loogu talagalay, baytariyada waxaa lagu soo bandhigi doonaa sida ku qoran sumadaha kaas oo aan ku kala soocnay feylasha, si aan awood ugu yeelano inaan si dhaqso leh ugu galno feylasha sida ku xusan kala-saarkeena ama calaamadeynta.
Sida loo tirtiro xirmooyinka faylka
Maaddaama Apple ay na siiso ikhtiyaar aan ku wada ururinno noocyada kala duwan ee feylasha ee aan dhigno oo ku yaal boggayaga, sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan wada tirtirno, ikhtiyaar la qadariyo, gaar ahaan haddii aan ugu dambayntii go'aansanay inaan amar ku bixinno miiskayaga.
Si aad u tirtirto xirmooyinka feylasha ee macOS ay sameysay markii ay shaqeyneyso shaqadan, waa inaan kaliya u wareeji faylasha galka qashinka. Markii aan iskudayeyno inaan ka soo ceshano feylasha qashinka, hadii ay ahaan laheyd, lama ururinayo, marka waa inaan mid mid u kala hubinaa kuwa aan dooneyno inaan ka soo kabano ama aan ku soo celino dhamaanteed desktop isla markaana aan eegno baytariyada waxay abuurtay ikhtiyaarkan, haddii aan weli ku sii shaqeyno kumbuyuutarkayaga.
My Mac kuma jaanqaadi karo macOS Mojave laakiin waxaan rabaa in aan isticmaalo faylalka galka ah
Sidii aan ku sheegay bilowgii maqaalkan, Apple waxay ka baxday cusbooneysiintan dhammaan qalabka wixii ka horreeyay 2011 (oo ay ku jiraan), iyagoo ah moodeellada kaliya ee la jaan qaadi kara kuwa ay shirkaddu billowday 2012-kii. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato shaqadan, laakiin waxaad leedahay Mac oo aan ka fiirsanaynin qalabka aan is-waafaqsanayn, saaxiibkay Jordi wuxuu daabacay maqaal maalmo ka hor halka aan ku tusno sideen u rakibeynaa si looga faa’iideysto astaamaha cusub.
Haddii aadan haysan waqti ama rabitaan inaad noloshaada ku adkaato xoogaa inaad awood u yeelato inaad ka faa'iideysato howlaha cusub ee macOS Mojave ay na siiso, waa inaad yeelataa dulqaad yar, maxaa yeelay hubaal horumariyaha qaar ayaa bilaabaya barnaamij kuu oggolaanaya inaad adeegsatid shaqadan oo waxay u badan tahay inay ku dareyso astaamo habeyn cusub oo aan laga heli karin wadan ahaan.
Sida loo cusbooneysiiyo macOS Mojave xoq
Haa, wali ma aadan go'aansan inaad rakibto nooca ugu dambeeya ee macOS waxaa loo heli karaa Mac is waafajin kara, markale saaxiibkay Jordi wuxuu abuuray cashar wanaagsan oo aan ku tusinayno dhammaan tillaabooyinka aad raaci karto si samee rakibo nadiif ah oo ah macOS Mojave.
Thanks to iCloud, waa wax aad u fudud in la sameeyo keyd dhammaan faylashayada. Sidoo kale, had iyo jeer rakibo gebi ahaanba nadiif ah ayaa lagula talinayaa nooc kasta oo cusub oo ah nidaamka qalliinka, iyadoon loo eegin haddii aan ka hadlayno kumbuyuutar ama qalab mobile ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Mojave » Sida loo sahlo xirmooyinka faylka ee macOS Mojave
Aquavias, waa ciyaar madadaalo leh oo ay tahay inaan ka hortagno abaaraha adoo dhisaya biyo mareenno
Mojave Compatible VMware Fusion 11 Imaatinka iyo Waxyaabaha Ka Fiican Qalabka